> Resource > Utility > Sida loo Unformat Memory Card
Waxaan Unformat formatted karaa Memory Card?
Saaxiib A ee igu deymin card xusuustiisa. Ma jirto meel ku filan, sidaa darteed waxaan go'aansaday in qaab. Markaas saaxiibkay ii sheegay inay jiraan qaar ka mid ah sawirrada kaadhka xusuusta in. Waxaan dareemayaa inaan hadda ka qoomameyn. Ma jirtaa xal kasta oo si unformat kaadhka xusuusta? Waad ku mahadsan tahay wax badan.
Waa hagaag, formatting shil ah ee kaadhka xusuusta ah mar walba na soo Bixiyaa wax waayo-aragnimo ku faraxsaneyn. Waxaad u badiyay dhammaan faylasha muhiim u ah oo ku saabsan istareexa. Waxaad u maleynayaa in ay laga yaabaa in weligood la waayay. Laakiin waa tan runta dhabta ah? Jawaabtu waa MAYA weyn! Dhab ahaantii, formatting kaadhka xusuusta ah u tirtiri doonaa xogta aad, laakiin files weli ku yaal ka hor inta aadan gelin data cusub si ay u overwrite. Sidaas, haddii aad joojiso isticmaalka aad kaadhka xusuusta formatted, waxaad leedahay fursad aad u weyn in la soo celiyo kaadhka xusuusta formatted.
Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac waa utility ah soo kabashada xogta si sahlan loo isticmaalo oo khatar la'aan kugu caawiya inaad unformat kaadhka xusuusta formatted. Waxaa kuu saamaxayaa inaad unformat ku dhowaad dhammaan faylasha ka kaarka formatted xusuusta, oo ay ku jiraan sawirrada, videos, files audio iyo in ka badan. Kaadhka xusuusta sida kaarka SD, kaarka MMC, SDHC adag, iwm ayaa dhammaantood si buuxda u taageeray.
Download version maxkamadda barnaamijka Wondershare Data Recovery inuu ka soo kabsado kaadhka xusuusta formatted hadda!
Card Memory Unformat in 3 Talaabooyinka
Waxaan idin tusin doonaa sida loo unformat kaadhka xusuusta la Windows version of Wondershare Data Recovery. Haddii aad qabto Mac ah, waxaad kala socon kartaa hawlaha la mid ah la version Mac.
Tallaabada 1 Select hab kabashada si loo soo celiyo kaadhka xusuusta formatted
Xiriirka aad kaadhka xusuusta formatted la your computer iyo ordaya Wondershare Data Recovery, aad arki doonaa suuqa kala barnaamijka sida image hoos ku qoran.
Aan dooro "lumay Recovery File" mode sida isku day ah oo hore ay u unformat kaadhka xusuusta aad.
Fiiro gaar ah: Fadlan hubi in aad kaadhka xusuusta formatted in si wanaagsan loo-xiran karo your computer.
Tallaabada 2 baarista kaadhka xusuusta formatted
Hadda kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan aad kaadhka xusuusta formatted oo guji "bilow" badhanka si ay u bilaabaan baar files waxa on.
Si unformat kaadhka xusuusta, raalli firfircoon "Enable Deep Scan" doorasho uu furmo.
Tallaabada 3 kaadhka xusuusta Unformat
Halkan dhammaan faylasha recoverable aad kaadhka xusuusta formatted lagu soo bandhigi doonaa suuqa kala barnaamijka. Waxay noqon doontaa in ay ku eegaan sawirada ama magacyada file aragtida in lagu hubiyo sida badan ee aad files formatted la soo kabsaday kartaa in aad.
Markaas waxaad karaan faylasha aad rabto oo guji "Ladnaansho" button iyaga badbaadiya, si aad u computer.
Fiiro gaar ah: Fadlan ha badbaadiyo files ka dib si aad kaadhka xusuusta formatted inta lagu guda jiro dib u soo kabashada.
"Screen Black" on xawaaladaha (Windows 7, XP & Vista)
Vista hayaa Rebooting on xawaaladaha - Sidee inaan ku saxno
Sida loo uninstall Barnaamijyada aan idin tagsiin karo
NTLDR maqan yahay - 2 Siyaabo Sahlan ee dayactir Waxaa
Sida loo Dayactir Hal.dll Error oo maqan
XP ma kabaha doonaa? Isku day inaad sidan